दाई करोडपति भाई मन्दिरको पेटीमा। दाई भाउजु सधैं त्यहि मन्दिरमा पुजा गर्न आउँछन्(भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > दाई करोडपति भाई मन्दिरको पेटीमा। दाई भाउजु सधैं त्यहि मन्दिरमा पुजा गर्न आउँछन्(भिडियो सहित)
काठमाडौं, १३ पुस । क्रिसमसको रात काठमाडौं सुत्दै थियो तर चर्चित कलाकार तथा भिजे शिशिर भण्डारी सडक पेटीमा सुत्नेहरुलाई उठाउंदै थिए । उनी संगै मानव बचाऊ अभियानका पुरुषोत ढुंगाना र निश्चल पनि थिए । वास्तवमा जाडोमा सडकमा सुत्नेहरुका लागि न्यानो कपडा बांड्दै हिड्दै थिए, शिशिर, पुरुषोतम, निश्चल र लक्ष्मण । त्यस क्रममा आ आफ्नै कथा भएका व्यक्तिहरु भेटिए । कोहि परिवारबाट बाध्यताले टाढा भएका भेटिए । कोहिलाई आफ्नै परिवारले निकालेर सडक पेटीमा आएका भेटिए ।
चावहिलको गणेस्थानमा बिगत ५ बर्षदेखि दिउंसो मन्दिरमा बस्ने र राती त्यहि नजिकको पसलमा सुत्ने कायस्थ दाईको कथाले सबैलाई रुवायो । उनलाई आफ्नै दाइ र भाउजुले घरबाट निकालेका रहेछन् । सिन्धुपाल्चोक घर भएका कायस्थको दाई चावहिल चुच्चेपाटीमै ५ तले घरमा बस्दा रहेछन् तर उनकै भाई भने मन्दिरको पेटीमा ।
कायस्थले सबैलाई रुवाउने कुरा बताए – दाजु भाउजु सधैं यहि मन्दिरमा पुजा गर्न आउंछन् तर मलाई फर्केर पनि हेर्दैनन् । आफुलाई काम गरेर खान मन लागेको बताउंदै उनले गाउंमा एउटा टहरो हाल्ने जग्गा दिलाईदिन आग्रह गरे । आमा र बुवाको निधनपछि को कथा सुनाउंदै उनी रोए – भिडियो हेर्नुस
के अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अलजजिरामा पशुपतिकाे समाचार आएकै हाे त? यदि हाे भने देशकै बेइज्जत! सेयर गरौ !
आइसोलेशनमा मृ त्यु भएका कपिलवस्तुको युवकको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट यस्तो!